April 1, 2021 - Myan News
သူ့ကစားသမားဘဝ အကြီးမားဆုံး ဆုံးရံှူးမှုကို ရင်ဆိုင်စေခဲ့တဲ့ ပွဲအကြောင်း ပီကေး ထုတ်ပြော
ဘာစီလိုနာခံစစ်မှူး ပီကေးက သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝ အဆိုးရွားဆုံး ပွဲစဉ်ကတော့ လီဗာပူးကို အန်ဖီးကွင်းမှာ ၄-၀ ဖြင့် အရေးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ပါလို့ ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ စပိန်တီဗီပရိုဂရမ်နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပီကေးက ၂၀၁၉ ချန်ပီယံလိဂ် ဆီမီးဖိုင်နယ် ဒုတိယအကျော့ပွဲနဲ့ ပက်သက်လို့ ဝန်ခံစကားဆိုခဲ့တာပါ။ ပထမအကျော့မှာ လီဗာပူးကို ၃-၀ ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် ဘာစီလိုနာက ဗိုလ်လုပွဲကို ရောက်မယ်လို့ ရေပန်းစားနေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ အဆိုပါ ရေပန်းစားမှုကို လီဗာပူးအသင်းက ရိုက်ချိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ကစားသမားဘဝ အကြီးမားဆုံး ဆုံးရံှူးမှုကို ရင်ဆိုင်စေမှုနဲ့… Continue Reading →
လီဗာပူးနဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ် ပထမအကျော့ကို ရာမိုစ့် အပါအဝင် ရီးရဲလ်အသင်းသား (၅) ဦး လွဲမည်
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်က မတ်လ နိုင်ငံတကာသီတင်းပတ်မှာ စပိန်နဲ့ သွားရောက် ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ ရာမိုစ့်ဟာ ခြေသလုံးကြွက်သား ဒဏ်ရာ ရလာခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုသွားပါတယ်။ ကလပ်ဘက်က ရာမိုစ့်ဒဏ်ရာ ပြန်ကောင်းလာဖို့ ဘယ်လောက်ထိ ကြာမြင့်မယ်ဆိုတာကို မကြေညာပေမယ့် အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် ခံစစ်မှူးဟာ လီဗာပူးနဲ့ပွဲကိုလွဲဖွယ်ရှိတယ်။ ကိုဆိုဗိုဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ စပိန်အသင်းပွဲမှာ ရာမိုစ့်ဟာ ၄ မိနစ်ပဲ ပါဝင်ကစားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ တိုနီ ခရုစ်၊ ဟာဇက်၊ ဗယ်ဗာဒီနဲ့ ကာဗာဂျယ်တို့ကလည်း ဒဏ်ရာကြောင့် ရီးရဲလ်လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်တွေမှာ မပါနိုင်ခဲ့ပါဘူး။… Continue Reading →
အင်္ဂလန် ယူ-၂၁ ပွဲအတွင်း ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသလို ပွဲပြီး ရန်ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဒေါသအိုးလေး ကာတစ်ဂျုံး
လီဗာပူးအကယ်ဒမီ နည်းပြတွေက ကားတစ်ဂျုံးဟာ ကလပ်မှာ ပုံမှန်မြင်ရလေ့ရှိတဲ့ အကယ်ဒမီထွက်တွေလို ရိုးရိုးအေးအေး ကစားသမားမျိုး မဟုတ်ဘဲ စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြပြီး ပေါက်ကွဲတတ်တဲ့ ကစားသမားမျိုးလို့ မှတ်ချက်ပေးထားခဲ့တယ်။ မနေ့က ယှဉ်ပြိုင်ကစားတဲ့ အင်္ဂလန် ယူ-၂၁ နဲ့ ခရိုအေးရှား ယူ-၂၁ အသင်းတို့ ပွဲမှာတော့ ဂျုံးက သွင်းဂိုးတစ်ဂိုး ရယူပေးခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်အသင်း ၂-၁ ဖြင့် အနိုင်ရမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ရံှူးထွက်ကို ရောက်ဖို့ဆိုရင် အင်္ဂလန်က ၂ ဂိုးပြတ်ဖို့ လိုခဲ့တာကြောင့် နောက်တစ်ဆင့်ကိုတော့ မတက်နိုင်ဘဲ ပြိုင်ပွဲက… Continue Reading →
အံ့အားသင့်ဖွယ် ခြေလှမ်း တစ်ရပ်အဖြစ် နည်းပြလောကထဲ ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဒန်နီရယ် အဂ္ဂါ
ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူပြီး ၅ နှစ်အကြာမှာတော့ ဒန်နီရယ် အဂ္ဂါဟာ သူ့ရဲ့ဇာတိ ဒိန်းမတ်မှာ နည်းပြချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူကာ အုပ်ချုပ်မှုလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းမှာ ၈ နှစ်ကြာ ကစားခဲ့တဲ့ အဂ္ဂါဟာ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့အတူ အသင်းကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရသူပါ။ သူဟာ လီဗာပူးအတွက် ၂၃၂ ပွဲထိ ကစားပေးထားသူဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ မှာ အကယ်ဒမီကလပ် ဘရွန်ဘီကို ပြန်သွားခဲ့တယ်။ ၂ နှစ်အကြာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ဘောလုံးကစားခြင်းက အနားယူခဲ့ပြီး ထိုစဉ်က အသက် ၃၁ နှစ်ပဲ… Continue Reading →
အကြီးစား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ မိတ်ဘက် ရလိုက်ပြီး ဈေးကွက်ထဲ အပီ ဝင်ကြမ်းတော့မယ့် လီဗာပူး
လီဗာပူး ဘောလုံးအသင်းနဲ့ ဘော်စတွန် ရတ်ဆော့ ဘေ့စ်ဘောအသင်းတို့ရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ FSG ဟာ RedBird Capital Partners အဖွဲ့ရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ FSG ရဲ့ တန်ဖိုးကို ပေါင် ၅.၃၂ ဘီယျံအဖြစ် တွက်ချက်ကာ ရှယ်ယာစုစုပေါင်းရဲ့ ၁၀% ပမာဏဖြစ်မယ့် ပေါင် ၅၃၃ သန်းကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ သဘောတူညီမှုနဲ့အတူ FSG ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုတွေထဲကို RedBird ဘက်ကလည်း ဝင်ရောက်လာပါမယ်။ အခြားသော ကိစ္စတွေကို ချန်လှပ်ပြီး… Continue Reading →
Myan News is reliable online media in Myanmar. We provide real time and trustworthy content across the digitial platform.
© 2021 Myan News — Powered by WordPress